Kitra – «Telma coupe de Mada» : hiatrika ny famaranana ny Cosfa sy ny Fosa Juniors | NewsMada
Kitra – «Telma coupe de Mada» : hiatrika ny famaranana ny Cosfa sy ny Fosa Juniors
Hifandona eo amin’ny famaranana, amin’ny “Telma coupe de Mada 2017”, ny Cosfa Analamanga sy ny Fosa Juniors Boeny. Izy ireo no tafavoaka teo amin’ny manasa-dalana, notanterahina, omaly alahady. Tany Mahajanga, tamin’ny isa mazava, 2 no ho 0, ny nandresen’ny Fosa Juniors ny RTS Jet Mada Itasy. Baolina roa matin’i Jean-Yves, teo amin’ny minitra faha-68 sy ny an’i Dax, teo amin’ny minitra faha-71. Nifandanja ny lalaon’ny roa tonta, teo amin’ny tapa-potoana voalohany. Nitovy ny fanafihana na somary nanantombo kely aza ny tompon-jaridaina. Ny RTS Jet Mada no saika nahafaty baolina minitra vitsy mialoha ny fialan-tsasatra saingy nidona tamin’ny tsivalamby ny dakan’i Tsiry, taorian’ny iray roa, nifanaovany tamin’i Solo moto.
Nanova ny endri-dalaon’ny Fosa Juniors, kosa ny fidiran’i Dax, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nihatsara ny rindram-panafihana hany ka nahitam-bokany izany, izay nahafatesan’izy ireo ny baolina roa.
Navotan’i Nono ny Cosfa
Lavon’ny Cosfa, tany amin’ny kianjan’Ampasambazaha tamin’ny isa tery, 3 no ho 2 ny AS Adema, izay samy ekipa avy amin’ny ligin’Analamanga avokoa. Baolina telo, nampidirin’i Nono ho an’ny miaramila teo amin’ny minitra faha-14, 54, 64. I Ruphin sy i Onja kosa nahafaty izany ho an’ny Adema.
Niady ny fihaonana, na nitarika anisa foana aza ny miaramila. Nilalao 10 ny Adema, teo amin’ny minitra faha-81, taorian’ny karatra mena, azon’i Onja, izay voalaza fa mody nianjera “simulation”. Tsy faly tamin’izay ny mpomba ny Adema ka nitoratoraka. Voatery naato ny lalao saingy vetivety ihany dia niverina. Raha tsy misy ny fiovana, hatao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny alahady 26 novambra, ny famaranana ho an’ity “Telma coupe de Mada”, ity.